Sekuyisikhathi eside kwaziwa kahle ukuthi izidakamizwa Anabolic amashumi eminyaka esetshenziswa kwezemidlalo ukufeza ngokunqoba letinkhulu naletincane. Nokho, akuzona zonke umsubathi iyakwazi ukuzisebenzisa kahle. Ukuze uthole zazuza ekuqeqeshweni kuphela esetshenziswa ama Yiqiniso kumele ihlangabezane izimiso ezimbalwa ezilula ukuthi abasubathi abaningi ukunganakwa. Esinye isici esibalulekile yokwamukela mithi - amandla ngethonya lazo emzimbeni. Ngaphandle kokukhetha, zonke Ama-anabolic steroid angaphansi ukushiyana kwezidalwa ezithile e izibonisi eziningana ukhiye. Into ebaluleke kakhulu kubo - yikhono sithole yemisipha, androgen engemihle. Njengomthetho, zonke lezi zici zihlobene nomunye futhi kulapho lokhu noma lokhuya quality, evelele lokhu noma ukuthi "pobochki".
Ngakho, sicabanga imithetho eyisisekelo reception yabo. Okokuqala, inkambo steroid kufanele iyawakha ukuze umthamo izithako ezisebenzayo main babe omncane. Lapho zisetshenziswa kahle, iyiphi lisha kule bhizinisi uthole okuningi ngisho, kubonakala, kusukela ingane izidakamizwa okuhlushwa. Enye into, lapho abasubathi bazi noma bengazi kudle inkulu kakhulu umthamo ekuqaleni nasesikhathini esizayo banayo ukusebenzisa izingxenye nakakhulu, ukuba njalo sifinyelele imiphumela emisha. Nokho, ayanda lokuhlushwa ketshezi luyasebenza, evelele kuyoba engemihle. Ngenxa yalesi sizathu, abasubathi abaningi babe ukuthatha imithi eminingi ezihambelana yesondlo.
Okwesibili, i-course yokuqala steroid ngesisindo, amandla noma ukwandisa Bump kufanele okungenani iqukathe izinto 'soft'. Ngokwesibonelo, bodibilderam inzuzo esisindo sifikile embundwini yayo ekuthuthukiseni zofuzo Kunconywa ukuthatha enjalo hormone, efana "Nandrolone Decanoate" "Primobolan®" "Turinabol" futhi m. P. Of komthamo wokuqala ngokuvamile ingeqi 200-300 mg ngesonto, kwesibili - mg kungekho kuka-500 esikhathini ngesikhathi esifanayo, kanti owokugcina uyoba ngo - mayelana 30 mg ngosuku.
Okwesithathu, inkambo steroid nezidakamizwa obuqinile kufanele kwenzeke ukuba silahle isikhathi lapho izidakamizwa ukukhanya ngeke besakwazi ukubhekana umsebenzi oyinhloko. Lokhu kungaba hormone ezifana testosterone, trenbolan, methandrostenolone futhi t. D.
Okwesine, inkambo yesibili kwezidakamizwa kufanele kuqale lapho imiphumela emibi ngowokuqala iqedwe, futhi lapho umphumela lokuzuziwe ukuthuthukiswa wokuqala ongakabi gone. Ngokuvamile kule nkathi yesikhathi kuthatha izinyanga eyodwa kuya kweziyisithupha. The eside kwaba isikhathi ngamalungiselelo ama-hormone, isikhathi eside ukubuyiselwa. Ngenxa yalesi sizathu, abasubathi abaningi ungazenzi noma yiziphi amakhefu ekusebenziseni kwabo, kuyilapho kokuqhubeka emisebenzini yabo. Lesi sakamuva, yebo, ukuze ngentando yabo, ngoba asikho isiqinisekiso ekupheleni nemisebenzi yabo ukuncintisana ukulondolozwa wezempilo.
Ngakho, inkambo yokuhlakanipha steroid Wabasaqalayo ukuba akhathazeke eyodwa izidakamizwa ezithambile ngezilinganiso encane. Into esemqoka - musa ukugxila nokusetshenziswa kwezidakamizwa Anabolic, futhi kuhambisana nazo zonke izimfuneko eziyisisekelo ingxabano, isibonelo, umbuso ukuqeqeshwa, umsoco, ukuphumula, njll ...
Serratus kwemisipha. Isethi umzimba.